Fadeexadaha Mashaariicda Tareenka Xawaaraha Sare ee Ka Warbixinta Xisaabaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDhibbanayaasha mashruucyada tareenada xawaaraha sare
30 / 05 / 2016 06 Ankara, 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Fadeexadaha Mashaariicda Tareenka Xawaaraha Sare Warbixinta TCA: Fadeexada ka jirta balaayiin rodol oo ah mashruucyo tareen xawaare sare ah, oo ay dowladdu ku xayeysiisay aagaga doorashada iyo aruurinta codadka, ayaa ku soo shaac baxday warbixinta SAI.
Marka loo eego natiijooyinka ka soo baxay warbixinta SAI ee lagu baaro mashaariicda, 43, oo ka kooban boqolkiiba 49,7 boqolkiiba dhammaan maalgalinta 'SOE', ayaa ku dhaawacmay inta badan hindisooyinka tareenka ee qiimihiisu yahay TL 200. Sida warbixinta lagu sheegay, maadaama sharciga wax soo iibsi dowladeed uu dhigayo in qandaraaska aan la qaban, hindisooyin la mid ah ayaa dib loogu soo celiyay isla isla. Tani waxay horseedday koror ku yimaada kharash ku dhow 2. 4-XNUMX jeer ka dheer intii la filaayay ee mashaariicda tareenka xawaaraha sare ayaa soo baxay.
In kasta oo qaybaha harsan ee mashaariicda aan dhammaystirnayn waqtiga loo baahan yahay in dib-loo-hawl-geliyo, haddana kordhinta shaqada iyo kordhinta wakhtiga ee ay bixisay Golaha Wasiirradu waxay kordhisay qiimaha iyo dhamaadka maalgashiga. Qaar ka mid ah mashruucyada ayaa la hindiseeyey iyada oo aan sahamin xagga dhulka iyo dhulka ahi ku filnayn. Gunnooyinka maalgashiga waxaa loo adeegsaday si ula-kac ah. Kormeerka shirkadaha la-tashiga ee fuliyay kormeerka dhismaha si ku filan looma qaban. Qaar badan oo ka mid ah dhaqamada sharci-darrada ah ayaa lagu tiriyaa warbixinta TCA iyadoo dhowr iyo toban digniino ah oo loo soo diray TCDD ayaa lagu taxay midba midka kale. Si loo hubiyo ka qeybgalka shirkado badan ee hindisada, tilmaamaha maamulka iyo farsamada ayaa la weydiiyay in loo diyaariyo si cad oo waadix ah. Waxaa lagu xasuustaa in xNUMX kun oo kiiloomitir ee xadka xawaaraha sare ee xawaaraha sare loo qorsheeyay in lagu dhisayo 2023. “Qaadista tillaabooyin si looga faa’iidaysto adeegsiga kheyraadka iyo hufnaanta xawaaraha sare ee 10. Dhammeystir waqti ku habboon higsashada Qorshaha Horumarineed ”.
XARUNTA SULIDKA 2 SOLID EE SİVAS-YERKÖY, TRAIN was 7 SANO NIGHT
Warbixinta xisaabinta bogga 367 ee ay diyaarisay Maxkamadda Xisaabaadka ee ku saabsan TCDD, tusaalooyin hindise sharci-darro ah ayaa lagu daray. Sida ku cad natiijooyinka ka soo baxay Maxkamadda Xisaabaadka, mashruucii ugu dambeeyay ee qaybta Yerköy-Sivas ee qadka tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Sivas waxaa lagu abaalmariyey qandaraaska mashruuca horudhaca ah oo aan laheyn daraasad ku filan iyo daraasad qoditaan dhulka ah.
2008 jilcan jilicsan 840 milyan oo ginni ayaa ku guuleystay shirkadda, qandaraaska ka dib markii la saxeexay mashruucan marka la eego isbeddelada farsamada iyo qiimaha ee saameyn weyn ku yeelan doona. Iyada oo isbeddelada lagu sameeyay oggolaanshaha TCDD, wadada ayaa loo beddelay kiiloomitir kiiloomitir 251 kiiloomitir kilomitir ah. Dhererka tunnel wuxuu ka kordhay 189 km ilaa 10,6 km. Waxaa la go'aamiyay in la dhiso buundada tareenka ee loo yaqaan '41,9 mitir' oo ka kooban qeybihi ay soo buux dhaafiyeen. Dariilooyin furan iyo kuwo xirid leh ayaa laga dhex dhisay qeybaha kala-baxa sababtuna waa aagga cilada. In kasta oo ay shirkaddu qarashgareeysay jilicsanaanta 183 milyan oo ginni, qandaraaska waxaa la joojiyay kaliya kadib markii kalabar khadka la dhammeeyay. Jilicsan ee ka haray kiiloomitirkii 840 ee haray ayaa dib loo bilaabay. 108 hindise isdaba joog ah oo ku kacaya qiimaha xariijinta 3 bilyan 1 milyan oo rodol oo kordha, 15 milyan ginni 840 bilyan 1 milyan ginni soosaar. Xilliga ugu dambeeya wuxuu ka kordhay 855 illaa 2011.
Sida lagu sheegay warbixinta, sababta ugu muhiimsan ee korodhka qiimaha qadka Yerköy-Sivas in ka badan labanlaab ah iyo xaqiiqda ah in 7 la dhammaystiri doono dabayaaqada sanadka waa sababta ugu muhiimsan. Majirto suurtogal ku filan sahanka ciidda ka hor inta uusan jilcin. Intii lagu guda jiray howsha soo saarista, TCDD waxay ka codsatey shirkadda inay joojiso dhismaha, laakiin shirkaddu ma aysan joojin warshadihii tunnelka. Si kastaba ha noqotee, TCDD kama aysan shaqeynin nidaamka maamulka iyo sharciga. Ciladaha iyo karti darida ayaa ka soo baxday howsha kormeerka iyo kormeerka ee mashruuca. Warbixinta, baaritaanka lagu bilaabay mawduuca waxaa la weydiistay in la dhammeeyo oo la baaro sida ugu dhaqsaha badan.
LACAG BADDALO KA DAMBEEYA KALIYA KALIYA BURSA LINE
Tusaale kale oo cajiib ah oo ku jira warbixinta TCA waa dhismaha kaabayaasha tareenka ee Bursa-Yenişehir oo lagu qandaraasley 2011 milyan oo ginni 393,2.
Sahamada dhulka lagama maarmaanka ah lama fulin kahor qandaraaska mashruuca. Dhul beereed qiimo leh, Geed-dhireedyo iyo geedo-cagaar, iyo sidoo kale Hawlaha Biyaha ee Gobolka (DSI) Qorshooyinka biyaha ee sanadlaha ah ee 20 ee biyaha la cabbo waxay saameyn ku yeelan doonaan khaladaadka mashruuca, shirkadda waxaa la siiyay ka dib markii qandaraaska uu bilaabay inuu shaqeeyo. Sababtaas awgeed, dariiqa ayaa wax looga beddelay qaybta kiiloomitir ee 75 kiiloomitir ee xariiqda kiloomitir 50.
Kaddib markii la beddelay dariiqa, hindise-bixiyuhu wuxuu ku kordhay alaabada ganacsiga tunnel-ka, halkaas oo ay ku siisay sicir halbeeg ka sareeya kharashyada qiyaasta ah. Qiimaha qaybta ayaa si dhakhso leh loogu dhammaystiray alaabada meheradda sare. Sidaasoo kale, wuxuu ku qaatay 96 oo kaliya kiiloomitir, inkasta oo uu ku isticmaalay 13 qiimaha qandaraaska. Dhammaan qiimaha qandaraaska ayaa la isticmaalay ka hor inta aan la dhammayn masaafadda 75 ee xarriiqa kiloomitir 10. Si loo dhammaystiro khadka intiisa kale, ganacsigii jiray ayaa la beddelay oo dib ayaa loogu galay geedi socodkii qandaraaska.
Warbixinta TCA, baaritaanka iyo baaritaanka uu bilaabay guddiga kormeerka TCDD waxaa lagu bilaabay digniinta TCA sababtoo ah kordhinta kharashyada mashruuca sababtoo ah khaladaadka ku jira qandaraaska khadka Bursa-Yenişehir iyo daahitaanka shaqada. Si kastaba ha noqotee, TCDD ayaa mar kale uga digtay Maxkamadda Xisaabaadka sababtoo ah baaritaankan iyo baaritaankiisa lama dhameystirin.
Isagoo xusay in Wasaaradda Gaadiidka ay diyaarisay waaxda ay quseyso, Maxkamadda Hanti dhowrka ayaa ka codsatay Wasaaradda inay baarto oo baaritaan ku sameyso dhammaan habraacyada diyaarinta iyo hirgelinta mashruuca.